Kooxda Khronos waxay u sameysaa hage Vulkan | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | GNU / Linux, Barnaamijka, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
El Kooxda Khronos waxay sameyneysaa dadaal ballaaran si loo horumariyo, kor loogu qaado loona jaangooyo API-yada furan ee loogu talagalay sawirada (OpenGL, Vulkan), barnaamijyada isbarbar socda (OpenCL), xaqiiqda dhabta ah (OpenXR) iyo kuwa kale oo badan (WebGL, OpenVG, OpenVX, ...). Mashaariic kale oo badan oo xiiso leh ayaa ku saleysan iyaga. Hagaag, hadda waxay qaadeen hal talaabo oo dheeri ah si kor loogu qaado Vulkan garaafka API-ga ah ayna u qaateen mashaariic badan iyo horumariyayaal
Waxa ay hadda sameeyeen waa abuur tilmaame si aad ugu bilowdo Vulkan. Dadaal weyn oo wadajir ah oo ka socda xubnaha Kooxda Khronos si ay kuu siiso barta ugu fiican ee laga bilaabi karo la shaqeynta API-kan. Akhris fudud, kaas oo wax kasta oo ugu muhiimsan la isku koobay wixii aan xiiso lahaynna laga saaray. Sidan waxay kugu xiri doonaan ilaha kala duwan ee horumarka Vulkan.
Haddii aad tahay horumariye oo aad xiiseyneyso akhrinta hagahan, waad awoodaa ka soo degso isla isla xiriiriye oo ka mid ah Bogga GitHub Laga soo bilaabo mashruucan. Iyadoo la tixgelinayo in adduunyada ciyaaraha ay leedahay taageero aad iyo aad u badan si loo abuuro ciyaaro fiidiyow ah oo loogu talagalay Linux iyo imaatinka Google Stadia, waa tallaabo istiraatiijiyadeed oo wanaagsan in la isku dayo in la soo jiito horumariyeyaal badan oo loo fududeeyo jidka marka ay doonayaan inay abuuraan cinwaano cusub.
Iyo habka, inkasta oo aysan wax badan u ahayn kiiska, laakiin maadaama aan soo sheegay barnaamijka GitHub, in la yiraahdo waxaa jira tirooyin aad u yaab badan oo ku jira degelkan halkaasoo qayb weyn oo ka mid ah mashaariicda ilaha furan ay martigeliyaan oo ay maareeyaan. Way soo baxeen waxay yiraahdaan qaar baa jira 40 milyan koontooyinka isticmaalaha taasi maahan Spam. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa maahan horumariyaha, waxaa jira koontooyin badan oo aan runtii wax ku darsanayn ama horumarinayn. Laakiin qiyaasaha qaarkood, waxay yiraahdaan waxaa jira ku dhowaad 5.000.000 oo horumariyayaal firfircoon oo waqti-buuxa ah iyo illaa 7 milyan waqti-dhiman, iyo in badan oo aan la bixin, iyadoo wadar ahaan 24.2 milyan oo horumariyayaal dhab ah. Tiradaasi waxay kor u kacday 1M ilaa 2018 waxaana lafilayaa inay gaarto 27.7M sanadka 2023. Waan ka faallaynayaa sababta oo ah waxay yihiin tirooyin naxdin leh oo ku saabsan sida bulshada u weyntahay, taasina waa kaliya GitHub ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Barnaamijka » Kooxda Khronos waxay u sameysaa hage Vulkan
Bill Gates wuu yaqaan sida loo sheego kaftanka aadka u wanaagsan ... miyaadan rumaysanayn?